China Cat Bag Portable Pet paaki Dog Cat Large Space Capsule Ije Ije Cat Bag Na-ebu Schoolbag factory na-emepụta | MiaSein
Ogbe akpa akpa obere akpa anụ akpa aja nkịta nkịta buru ibu, nnukwu oghere Capsule na-eje ije Cat Bag na-ebu Schoolbag
Aha aha: Ogbe akpa akpa obere akpa anụ akpa aja nkịta nkịta buru ibu, nnukwu oghere Capsule na-eje ije Cat Bag na-ebu Schoolbag
Nkọwa:Atọ akụkụ nnukwu oghere imewe, kwesịrị ekwesị maka nnukwu nwamba na nkịta. Nnukwu windo ihuenyo + oghere ikuku dị n'elu na-enye anụ ụlọ ahụ ahụmahụ na-enye ume ọhụrụ n'oge ọkọchị. Foldable bara uru imewe, na-azọpụta ohere na-adaba adaba ebu. Ugboro abụọ mgbochi ụzọ mgbapụ imewe, mgbochi oghere mkpọchi uwe + traction nkechi. Adjustmentdị nhazi ọtụtụ ntụziaka na-eme ka ọ dabara ma kwụsie ike na azụ, na eriri ubu elu nwere ike gbanwee, na-eme ka ọ dị mfe ibu. Nhazi zuru ụwa ọnụ na oge anọ, ọnọdụ abụọ na ọtụtụ arụmọrụ na-eji ihe mkpuchi ihu. Ise nchegbu, ise isi nchegbu isi nke n'úkwù, ubu, obi, na azụ na buttoto, belata nrụgide nke amị. Piel e biri ebi plastic shei, biko ọchịchịrị, ozugbo ọkụ, ka nwamba na-ele anya na ụwa na-eche ihe nchebe. Nnukwu ohere na-eme ka anụ ụlọ tụgharịa ma nweere onwe ha.
Nwụnye usoro: mmezi nke zipa isi nke otu akụkụ uzo transperent na n'etiti biini na sere ya elu. Mgbe ị dọrọ otu akụkụ, wụnye n'akụkụ nke ọzọ n'otu ụzọ ahụ. Tinye na fom, ma ọ bụ tinye diaper.
Style ： Pink, isi awọ, odo
Size (na cm): 36 * 36 * 40cm
Ihe: naịlọn EVA
Usoro ịsa: You nwere ike ịsacha akwa nkịta na akwa mmadụ. Ọ bụrụ na enwere ike ịnye anụ ụlọ ọgwụ pụrụ iche, ọ ga-aka arụ ọrụ iji gbuo nsen parasaiti nke uwe anụ ụlọ merụrụ. A ga-asacha akwa nkịta na nke ndị mmadụ iche. Ejila ịcha ọcha chlorine ma ọ bụ ikuku oxygen.
Nke gara aga: Ọdụm Obere Ntị Wig Dog Hat Pet Wig Gbanwere Okpu okpu okpu okpu isi
Osote: Puppy Dog Clothes Female Teddy Bichon Pomeranian Schnauzer Small Thick Four-legged Pet Autumn and Winter Coat
Uwe Pet Cat Mgbụsị akwụkwọ na Uwe Uwe Oyi na ...